अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको ढोका बन्द भएपछि खनालले राष्ट्रपतिको चाहना राखेका हुन् त ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २९, २०७४ समय: १०:३६:११
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल पार्टीभित्र वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने सबल नेताहरुमध्ये एक मानिन्छन् ।
तपाईंले राष्ट्रपतिमा चाहना देखाउनुभएको बुझिन्छ । के आफ्ना लागि पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको बाटो सधैँका लागि बन्द भएको बुझेर त्यतातिरको इच्छा प्रकट गर्नुभएको हो ?
-म जुनसुकै बेला पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्छु, प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छु, ढोका बन्द नै छैनन् । म ७० बर्ष पनि पुगेको छैन । दुई बर्षपछि मात्र पुग्छु । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा राष्ट्रपतिको पद जो गौरव र गरिमामय छ, पार्टीमै काम गरेको मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई त्यो जिम्मेवारी दियो भने संविधान कार्यान्वयन गर्न र देशकै निम्ति पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो अवधारण हो । यो अवधारणाको बीचबाट सोचेर कतिपय साथीहरुले मलाई राष्ट्रपति बन्ने कि भनेर पनि सोध्न थाल्नुभएको छ । मैले पनि पार्टीले उचित मूल्यांकन गरेर राष्ट्रपतिको पद दिन्छ भने अस्वीकार गर्दिनँ भनेर साथीहरुलाई भनेको छु ।
वर्तमान राष्ट्रपतिले आफूलाई दोहोर्याउन चाहनुभएको छ नि त ?
-राष्ट्रपतिको पद भनेको एकै व्यक्तिलाई दोहोर्याइरहनुपर्ने पद होइन । नयाँ नयाँ राष्ट्रपतिको खोज हुन्छ । र, सिंगो राष्ट्रले पनि यस्तो चाहना व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिइयो भने त्यो बढी महत्वपूर्ण होला ।
व्यक्तित्व र राजनीतिक पृष्ठमूमिका कारण राष्ट्रपतिका रुपमा तपाईं सर्वस्वीकार्य हुनुहोला । तर, के स्वयं तपाईंका पार्टी अध्यक्ष तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा हुनुहन्छ ? त्यस्तो केही संकेत पाउनुभएको छ ?
-यसबारे कतै पनि छलफल भएको छैन । नेतृत्व पंक्तिसँग पनि कुरा भएको छैन । हामीले कुनै सोच पनि बनाएका छैनौं । यो केवल चर्चा परिचर्चाका रुपमा आइरहेका कुरा हो । यसभन्दा बढी केही छैन ।आजको नेपाल(साप्ताहिक) मा खनालसँग सान्तोष आचार्यले गरेको कुराकानी ।